Ukukhusela uMntu oKwi-Intanethi | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 25, 2008 NgoMvulo, Februwari 25, 2008 Douglas Karr
Njengokuba umhlaba ubanjisiwe ekhompyutheni kwaye onke amagama owathethayo nawenzayo uya kubanjwa kwividiyo, kubalulekile ukuba uzipolise ngokwakho. Esi sisitshixo kumashishini anqwenela ukuvula iinzame zawo zokuthengisa kwibhlog nakwimithombo yeendaba zentlalo.
Ngelixa udibana nomntu osebenza naye kumdlalo we-baseball kwaye ukuba bakubone ungxola kwaye usela bekungeyonto inkulu ngaphambili, kwi-Intanethi akunamda phakathi kobomi bobuqu kunye nobeshishini. Ukuba une-Persona ekwi-Intanethi, leyo yeyakho imeko yomsebenzi ngokunjalo. Umntu othile akahluli kuwebsite yokuthandana ukuya kwi-LinkedIn - 'uku-intanethi' nje.
Imbali ekwi-Intanethi sele sisiXhobo soLuntu saBasebenzi
Abaqeshi sele besebenzisa UGoogle ukufumana kunye nokuphanda abasebenzi. Into yokugqibela oyifunayo kukushiya umzila, ubuqu okanye ishishini, elinokuchaphazela indlela inkampani yakho okanye ithemba eliza kukubona ngalo.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndandisebenza kwinkampani apho i-classified engafanelekanga yathunyelwa ngumqeshwa kwaye yenza ujikelezo. Nangona yayingenanto yakwenza nomsebenzi womntu, yaqatshelwa kwi-ofisi yabasebenzi bolawulo-uphawu olungenakuguqulwa kwaye luyakwenzakalisa amandla alo mntu okunyuselwa okanye ukuthatha eminye imisebenzi ngaphakathi kombutho.
Kudala ndichitha ixesha Ingqondo, emva kwexesha, isicelo esiluhlobo lomxube (kunye nokudityaniswa) kwevidiyo kunye nengxoxo. Omnye umhlobo uphawule ngokuhlwanje ukuba ubonile okunene malunga nokuziphatha ebantwini ebekade eyihlonipha ngenye indlela.
Ingxaki iphindwe kabini: I-Seesmic phantse lixesha lokwenyani, ke abantu bayancokola kwaye ngamanye amaxesha bangene kwiingxoxo ezishushu. Elinye icandelo kukuba iSesmic ivala umsantsa phakathi kobungcali kunye neshishini. Abanye abantu bayasela xa bencokola… abambalwa banxilile. Abanye abantu baye badubula ngenxa yeencoko malunga nenkolo kunye / okanye nezopolitiko.
Yinto entle ukuba sinetekhnoloji enje ngale apho umntu anokuwukhupha umphefumlo wakhe kwaye anxibelelane ngokufanelekileyo nabahlobo kwihlabathi liphela. Ingxaki kukuba umhlaba awukalulungeli olu hlobo lokungafihlisi okwangoku. Isixhobo esifana ne-Seesmic sinokubonelela ngetoni yokuqonda kwiingcinga zomntu emsebenzini, ebomini… kwaye sinike igalelo kuzinzo lwabo.
Umntu, onokuthi mhlawumbi abe ngumqeshwa ogqibeleleyo, unokukhutshwa kumathuba emva kokuba umphathi oqeshayo ehleli kwaye aqwalasele iiyure zeencoko zabo kwi-Intanethi.
Ukukhusela uMntu wakho
Kukho izinto ezimbalwa onokuzenza ukukhusela ubuntu bakho kwi-Intanethi kunye negama:
Thintela iincoko ezihlawulisiweyo ngesondo, inkolo, ezopolitiko, njl.njl apho unokufaka khona izimvo ezinokungaqondwa kakuhle. Thatha ezo ncoko ngaphandle kweintanethi.
Kuphephe ukuba phantsi kwempembelelo yalo naliphi na iyeza okanye utywala kwi-intanethi. Awunakuzilawula iimvakalelo zakho kunye nezenzo zakho.
Ngalo lonke ixesha gcinani engqondweni ukuba yonke into eniyenzayo yirekhodi iSikolo sakho, uMsebenzi, iiNgxelo, uRhulumente, kunye nosapho abanalo ukufikelela okulungeleyo.
Ukucutha umngcipheko nokususwa komngcipheko
Ezinye iinkqubo, nkqu ne-intanethi, zibonelela ngokususwa komxholo wakho. Funda loo Migaqo yeNkonzo kwaye ubone ukuba uyakwazi ukususa isigxina ividiyo, isandi, ezembali, njl. Njl. Ngendlela, amathuba okuphumelela amancinci kakhulu.
Nciphisa. Ukuba unencoko enye kwi-1 ebonisa ukuba uvuthela phezulu kwiPolitiki, qiniseka ukubamba iingxoxo ezili-10 1,000 ngaphandle kokuvuthela phezulu. Ukubonelela ngesiqulatho esithe kratya kwi-intanethi kuya kunciphisa umngcipheko womxholo ongalunganga onokufunyanwa ngumntu. Kwakhona, ayisiyonyani, kodwa inokunceda.
Khawufan 'ucinge! Elona cebiso lililo kukungaze ungene kwimeko kwi-Intanethi onokuthi ube neentloni ngayo kamva. Ziphephe nje kwaphela ezi meko.
Ndinethemba lokuba ngaminazana ithile siyakuba luluntu olunyamezelayo (mis) isimilo, siqonda ukuba izinto ezimbi zenzeka kubantu abalungileyo kwaye nabantu abalungileyo bayazenza iimpazamo. Kodwa kude kube lelo xesha, qiniseka ukuba ujonge esweni indlela ojonga ngayo kwi-Intanethi.
Ndingongeza ukuba le ncoko ngokuyinxenye iphefumlelwe UGqirha Thomas HoNgubani obhlogwe ngesihloko sokwenza i-intanethi Persona.
Feb 25, 2008 ngo-2: 48 PM
Sibeka umngcipheko omkhulu wokungena engxakini xa siqala ukucinga nge "personas" nokuba ku-intanethi okanye ngaphandle komgca. Intsingiselo yeyokuba asizizo thina kwaye sifihla ngabom into ethile okanye sizenze into esingeyiyo.
Olo hlobo lokucinga lunokuba yingozi kuba abantu banotyekelo lokunciphisa iziphumo xa becinga ukuba akaziwa.
Doug Ndikwacinga ukuba ubuyintsintsi yenqaku kwenye yeengxelo zakho ezingentla. Yongeza igama elinye kwaye ndikunye nawe.
Into yokugqibela oyifunayo kukushiya umzila, ubuqu okanye ishishini, elinokuthi [kakubi] inefuthe kwindlela inkampani yakho okanye umntu oza kukubona ngayo.
Ngokuqinisekileyo ndiyathemba loo mathemba ngeke be ngokuqinisekileyo ichatshazelwe yindlela yam ye-intanethi. Yinxalenye yomntu endinguye kunye nexabiso endilizisa etafileni.
Kwaye ndihlala ndicinga ukuba uMama kunye nomqeshi wexesha elizayo baya kujonga bobabini nantoni na endiyibeka kwi-intanethi. Loo nto indinceda ndikwazi ukuzilawula kwaye ndiyeke ezona zinto zibubudenge.
Feb 25, 2008 ngo-3: 08 PM
Impendulo entle, Chris!
Andiyi kuvuma ngentlonipho ukuba ukuba nomntu okwi-intanethi uyazifihla okanye uyazenzisa.
Ukuba kukho umntu oza kuya kwiintlanganiso, ndiyacheba ndize ndinxibe isuti. Everyday emsebenzini ndinxiba khakis and sheve every few days. Endleleni egodukayo ndingahle ndikrazule intsimbi emotweni, kodwa ukuba ndiqhuba iklayenti ngeenxa zonke, andizukuphosa i-AC/DC.
Ndikwanabo nobukrelekrele obuphoxayo obunokubacaphukisa abanye abantu ngamanye amaxesha. Xa ndikunye nabantu endisebenza nabo okanye abantu endithembayo, andifane ndibonise uburharha kuba abaninzi banokukubona kungafanelekanga.
Kuzo zonke iimeko, andikho ukunganyaniseki okanye andifihli yenene mna. Ndibonisa nje 'icala lam elilelona' okanye 'elona cala lifanelekileyo'. Isendim (ndithembe – ndihleli elubala kwimpazamo), kodwa kunyanzelekile ukuba ndifuna ukufikelela abona baphulaphuli babanzi kwaye ndifumane intlonipho yabantu.
Inqaku lam ngenene yinto esinokuvumelana ngayo - ilizwe alikakulungeli olu hlobo lokufihlwa. Akwaba bekukunjalo – bendinokunxiba iikhaki, ndingachebi, ndize ndikrazule “For those About to Rock” noogxa bam emotweni.
Ayenzeki naliphi na ixesha, kungekudala, nangona kunjalo.
Feb 25, 2008 ngo-5: 25 PM
Ndinawe apho, Doug. Ndiculela unomathotholo ngeefestile up!
Inye into emntwini ohleli estopini ecaleni kwam acinge ukuba ndingade ndibhanxe kancinci. Kodwa yenye into ukungqina ukuba ndinjalo ngokuthoba iifestile!